रोमान्सको साथमा फाईट भएको हिरो नं. १ को तेश्रो गीत - Aathikbazarnews.com रोमान्सको साथमा फाईट भएको हिरो नं. १ को तेश्रो गीत -
रोमान्सको साथमा फाईट भएको हिरो नं. १ को तेश्रो गीत
नायक जय किशन बस्नेतले निर्माण गरेको प्रदर्शोन्मुख चलचित्र “हिरो नं. १” को तेश्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । आफैंले सञ्चालन गरेको युट्युव च्यानल मोबाईल टिभी मार्फत “के गर्नु मंगले आफ्नै ढंगले” बोलको तेश्रो गीत सार्वजनिक भएको हो ।
नक्कली स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने उद्योगमा प्रहरीको छापा
एनआरएनएको मतदान प्रक्रिया सम्पन्न : मतदानमा २३४४ मत खस्यो,
चुरोट र सिगार महँगिने, कति बढ्यो कर ?